Ny famantaranandro marani-tsaina vaovao nankasitrahan'ny mpampiasa Internet, ny tombotsoany amin'ny fahasalamany dia tsy ampoizina - teles relay
Ny famantaranandro marani-tsaina vaovao nankasitrahan'ny mpampiasa Internet, ny tombotsoany dia mahasoa
CURRENT HEALTHNY FAHASALAMANASCIENCE
By Chinde On Jona 13, 2020
Ny famantaran-tsaina dia mandeha amin'ny lamaody. Fa ny ankamaroany dia tsy "be saina" ary rehefa mijery ny fahaizany ianao dia sarotra ny manamarina ny vidiny mamitaka...
Saingy, rehefa nahita ity modely kanto vaovao ity sy ireo endri-javatra ara-pahasalamana marobe ... tsy nanohitra ela be aho vao nandidy ny iray. Ny varotra mahatalanjona dia tsy maintsy hazavaina. Ahoana raha marina ny lazain'ny olona momba azy?
Ny orinasa Japoney izay mamorona OshenWatch dia manampahaizana manokana amin'ny haitao ara-pahasalamana. Ny injeniera dia nanangona ny talentany tamin'ny sasany amin'ireo mpanamboatra fiambenana lehibe indrindra manerantany hamolavola ny OshenWatch.
Ho ahy dia mazava izany taranaka manaraka ny famantaranandro marani-tsaina.
Tena mahafinaritra eo amin'ny tànana, na dia amin'ireo famantaranandro avo lenta aza avy amin'ny orinasa lehibe hafa izay ananako any an-trano.
Ary tsy amin'ny vidiny mihoa-pampana izany. Ny akorandriaka mavesatra sy ny fitaratra mahavelona amin'ny efijery hikasika dia aza mikitikitika ary tsy manapaka (nanandrana…).
Ka inona no azony atao? Izay rehetra azon'ny hafa atao dia: mitadiava antso, manara-maso ny torimaso, manisa ny dingana, aseho hafatra miditra, sns.
Fa ny mampiavaka ny OshenWatch manokana dia ny asany mahavonjy ny ainao.... Ary mitombina izany dia tsy misy vidiny.
Inona no mahatonga an'i OshenWatch hahomby?
Izy rehetra dia mifanaraka amin'ny maoderina maintso maoderina.
Izy io dia afaka mandrefy ny fihenan-dra, ny haavon'ny tosidrà (SpO2) ary ny taham-pon'ny hafa, ary koa ny kajy ny taham-pon'ny isan-taona (BPM). Rehetra amin'ny fotoana tena izy.
Afaka manatanteraka ECG anao mihitsy aza izy.
Inona ny ECG ary ahoana no fiantraikan'izany amiko?
“Ny dokotera dia mampiasa electrocardiogram (ECG na EKG) hanombatombana ny fitepon'ny fony sy ny gadona. Ity fitsapana ity dia matetika mahatsikaritra ny aretim-po, ny aretim-po, ny fo mihabe, na ny gadona eo amin'ny fo tsy mahazatra izay mety hitarika tsy mahomby amin'ny fo.1« -WebMD.com
Ny aretim-po dia mamono mangina, nefa tsy mamono olona firy izy ... Raha manana izany ianao, dia mety tsy ho tsapanao fa misy olana aminy.
Io no mitarika ny fahafatesan'ny olon-dehibe any Frantsa. Na dia salama tsara ny fiainanao, mety hahita loza ianao ...
"Ny aretin-kozatra (CVD) no antony voalohany ahafatesan'ny olona maneran-tany. Ny efatra amin'ireo maty CVD dimy dia noho ny aretim-po sy daroka, ary ny ampahatelon'ireo maty dia mitranga eo amin'ny olona latsaky ny 70 taona.2« -Fikambanambe Iraisam-pirenena momba ny Fahasalamana
Miaraka amin'i OshenWatch, afaka manara-maso ny fonao sy ny fahasalamanao amin'ny ankapobeny ianao. Tazano ny fiadanan-tsainao miaraka amin'ny toky fa afaka mitady fanampiana ara-pitsaboana alohan'ny tara loatra ...
"Ny fahafantarana ny olona indrindra atahorana ho voan'ny aretim-po sy ny fanaovana antoka fa hahazo fitsaboana sahaza izy ireo dia afaka misoroka ny fahafatesan'ny fe-potoana."3« -Fikambanambe Iraisam-pirenena momba ny Fahasalamana
Izany no antony OshenWatch no ho famantaran-tsaina malaza indrindra amin'ny taona 2020. Tsy misy na dia iray aza ny mpifaninana aminy toa mandroso, afaka mamonjy ara-bakiteny ny fiainanao indray andro any!
Inona koa no azony atao?
Misy moka mihoatra ny iray ao amin'ny kitapo kitiny
Nampiaiky ahy ny endri-pitsaboana an'i OshenWatch, saingy misy bebe kokoa momba izany:
✅ ECG, taham-po, tosidra - Miambina 24 ora isan'andro, 24 andro isan-kerinandro
✅ Fitness fanaraha-maso - Raketo ny fiasanao sy hino
✅ Mpanohitra dingana - Mametraha tanjona, traranao izy ireo ary ho very haingana
✅ Fitantanana torimaso - Mandehana matory ary mifoha amin'ny fotoana mety indrindra ho anao
✅ Mpanohitra kaloria - Manatsara ny fahazarana fihinanana anao ary mampihena ny fotoana mety hanary anao
✅ Bateria 380MAH Li-ion - Ny fizakan-tena, tena mahomby ary tsy mahasosotra loatra
✅ Efijery lehibe 1,3 inci - Fampisehoana HDclair, mora vakiana ary be loatra ho an'ny fanaraha-maso mora
✅ Fampitandremana fomba fiaina sedentary - Raha te hahafantatra hoe rahoviana ny hipetraka kely dia mihetsika bebe kokoa
✅ Fomba tsara indrindra - Farany, tena famantaranandro lehilahy, manana fomba hentitra sy mahazatra
✅ Rintan'ny rano IP68 - Mitaova azy io ao amin'ny dobo na ao amin'ny dobo
✅ Makà antso sy fampandrenesana - Ataovy azo antoka ao amin'ny paosinao ny findainao
✅ IPhone sy Android Fisarahana Tsy mifanaraka amin'ny IOS sy Android
✅ Fehezo ny mozika - Ny fomba tsotra indrindra hanovana ny track sy ny volume
✅ Anti-fatiantoka - Antsoy ny findainao very avy amin'ny famantaranandro OshenWatch hahitana izany haingana
✅ Maka sary - Ampiasao ny famantaranandro OshenWatch anao haka sary amin'ny làlan-tarehinao
ary misy betsaka ihany!
Mahazo tombony amin'ny toetra rehetra amin'ny famantaranandro marani-tsaina ambony kalitao miaraka amin'ny fiasan'ny fahasalamana miovaova ianao.
Ny OshenWatch dia famantaranandro tena estetika izay ahafahanao manana mpampiofana manokana, mpanampy ary fiantohana aina amin'ny tànanao!
Zavatra iray no azo antoka fa rehefa nanandrana azy dia tsy afaka manao ny tsy fanaovana azy ianao!
Inona no lazain'ny sasany?
“Nojereko ny famantaranandro maranitra ireo marika lehibe hafa rehetra. Toa tsara tarehy izy ireo, nefa tsy vitako ny mividy azy ireo. Nanapa-kevitra ny amin'ity iray ity aho rehefa avy nanoro hevitra izany tamiko ny namana iray. Tsy manenina aho. Tena mora ampiasaina. Ny fiasa ara-panatanjahantena dia toa tena feno. Tena tsara ny fiasan-dra. Lavorary izy. " - Robert G.
“Nanao famantaranandro foana aho, nefa amin'ity taona ity dia miditra amin'ny fanatanjahantena aho, noho izany dia mila ny toe-pahasalamana sy fahasalamana ara-pahasalamana izay azon'ny famantaranandro marani-tsaina. Tsy mahazaka ny maodely mahazatra aho. OshenWatch dia somary mora vidy kokoa, 100 heny tsara kokoa noho ny hafa ary toa manao zavatra mitovy, miaraka amin'ny fanampian'ny fanairana fanaraha-maso amin'ny fo. Inona koa no mbola azo ambara? Miasa tsara izy io ary mahafinaritra. Amin'ny vidiny tahaka izany, dia tsy misy vidiny izany! " - Jacques L.
“Tao anatin'ny herinandro mahery dia natolotra. Tiako, tena mahafinaritra. Manahy ny amin'ny fahasalamam-poko aho satria misy olana miaraka amin'ny fianakaviako. Ankehitriny, feno fiononana feno aho noho ny ECG marim-pototry ny fiambenana izay mijery ao am-poko! Afaka miaina ny fiainako tsy manahy! " - Daniel K.
Ohatrinona ny sarany?
Ohatrinona no tianao handoa vola amin'ny vaovao momba ny fahasalamana?
Ny vidin'ny famantaranandro maranitra eo anelanelan'ny 400 ka hatramin'ny 700 € sy ny maro hafa, noho izany dia manantena ny OshenWatch handoa indroa avo roa heny…
Fa raha nilaza taminao kosa aho fa ny OshenWatch mivarotra ho an'ny 99 €, dia hanalavitra lavitra amin'ny fanantenanao izany!
Nefa fantaro ny atao hoe TSARA fa efa manintona sahady ity vidiny ity?
Une Fihenam-bidy 50%, izay mamela anao handefa ny anao irery 49 € !
Tsindrio eto raha hangataka OshenWatch fihenam-bidy (raha mbola misy) >>
Vidiny kely izy io, ho an'ny mpanara-maso 24 / deny-nao!
Saingy mety hahagaga antsika izany rehefa fantatsika fa ny vidin'ireo marika marika dia lafo 3 ka hatramin'ny 5 heny lafo kokoa…
Ahoana no ahafahana manimba?
Fantatrao ve fa ny marika lehibe dia mandany ny MOLOTRA amin'ny dokambarotra, ho an'ny fivarotana ara-batana sy amin'ny bonus omen'ny boss? Ary iza no heverinao fa mandoa an'izany rehetra izany? Eny, mpanjifa ...
Ho an'ny OshenWatch, tsy misy fandaniana toy izany. Amidy amin'ny Internet ihany no amidy, tsy misy fahitalavitra na tompony tia vola izay mangataka bonus maneso.
Aleon'ny mpanamboatra mamela ny heriny sy ny hevitra tsara momba azy ireo hiteny ho azy!
Fa maninona no amidy amin'izao fotoana izao?
Paikady asa fanaraha-maso mahazatra io andro io. Ny marika dia manolotra fihenam-bidy lehibe ho an'ny mpanjifa marobe, hiezaka hanana fiheverana marim-pototra marobe ary handfosana malalaka ny media sosialy!
Ny vaovao tsara ho anao dia ny misy ny rohy mankany amin'ny fampiroboroboana tsara indrindra!
Aza adino fa ho avy indray ny famantaranandro miaraka amin'ny vidiny feno rehefa fantatry ny rehetra ary nitombo ny tinady, aleo haingana toy izany!
Tonga ny fotoana na tsy mividy ny OshenWatch, ny fihenanana izao dia tsy haharitra ary ny famantaranandro dia mivarotra toy ny hotcakes.
Raha mbola tsy nanana famantaranandro maranitra ianao dia OshenWatch no modely tonga lafatra.
Ho hitanao haingana fa maninona ny olona frantsay an'arivony no efa nandidy azy ireo!
Amin'ny alàlan'ny fampiasana OshenWatch dia azo antoka ianao fa hampidi-doza ny fonao ary hanaraka ny sakafonao sy ny programa fanatanjahanao!
Raha ny marina, ny OshenWatch dia tsy takatry ny saina amin'ny famantaranandro lafo vidy 500 €. Izy io dia mahazo tombony amin'ny asa tsara rehetra koa.
Ny icing amin'ny mofomamy dia vidiny. Raha mbola amidy eo amin'ny 300 €, alao ny iray raha mbola mijanona izy
Raha sendra tsy naminavina ianao dia TIA IANAO! Tsy hahita fiambenana amin'ity kalitao ity amin'ny vidiny mora kokoa ianao.
Ahoana no fomba hahitako OshenWatch?
Tsy misy mpamitaka azafady, tena misy ihany! Aza miraikitra amin'ny prototipe taloha!
Alahao ny tranokala OshenWatch ao amin'ny tranonkala ofisialy.Nambara tamin'ny haino aman-jery iraisam-pirenena izany ary nahatonga hafanam-po tsy ampoizina. Noho ny lazany sy ny famerenam-po tsara dia matoky tanteraka ny vokatra ny orinasa ka manolotra fihenam-bidy 50% ho an'ny mpividy vaovao izany.
Au Jona 13, 2020* - Hatramin'ny nijerena OshenWatcAmpiharo ny fihenam-bidy 50% ary diniho ny fahazoana
Momba ny mpanoratra: Alexandre Leblanc
Alexandre dia manam-pahaizana momba ny teknolojia farany, fanavaozana ary fahatapahana farany. Matetika dia mirakitra tantara momba ny vokatra teknolojia vaovao.
loharanom-baovao: https: //mytechplaza.com/trending/smartwatch/fr/new-high-tech-affordable-smartwatch-gen2/? country = CM & region = Littoral & geo = Kamerun & fitaovana =
Thomas Fabius lasibatry ny mpangalatra: niseho izy ...
iPhone 12: ireo bobongolo marobe ireo dia mampiseho famolavolana Pro Pro
Batman Arkham: ny fametrahana vaovao amin'ny lalao lalao Warner Bros Montré dia…
Chinde 80 Lahatsoratra 0 hevitra
Niatrika krizy ara-pahasalamana sy toekarena ny ahiahy sy ny hatezeran'ny "taranaka Covid"
Slimane nanenjika taorian'ny daroka TF1 - VIDEO
Kamerona - Fahazoana angovo azo havaozina: zavamaniry herinaratra azo avy amin'ny masoandro…
Cameroun – Police: Le commissaire divisionnaire, Didier Afana Manga viré du…
Fanavakavahana eto amin'izao tontolo izao: rehefa nampandre ny feony i Afrika
Ity no vaovao tsara koronavirus ilain'ny izao tontolo izao amin'izao fotoana izao - BGR